Shaqooyinka daryeelka caafimaadka ee isbitaal ku yaala Dubai halkaas oo loo diro CV? 🥇
Codsiga shaqada e-maylka waxaadna ogaataa sida
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 6, 2018
Shaqooyinka xanaaneynta ee Dubai iyo Abu Dhabi
Shaqooyinka kalkaalinta caafimaadka ee Dubai loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba. Shirkadda Dubai City ayaa la ogaaday inay caawinayso dadka ajnabiga ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, ayaa shirkadeenna qoreysa tilmaamo faahfaahsan oo loogu talagalay kalkaaliyayaasha iyo dadka ku sugan waaxda caafimaadka ee Dubai. Kalkaaliye Caafimaad ahaan Dubia ah, waxaad yeelan doontaa kor iyo wixii ka dambeeya waxkasta oo aad waligaa ogtahay.
Kalkaaliye ahaan, ma aha shaqo fudud oo la sameeyo. Shaqaalaha kalkaalisada badankood waxaa loo waxyooday inay caawiyaan dadka kale. Waa nooca caawimada hal marti oo u guurto midba midka kale. Shaqadani waxay u tahay qof kasta. Waxaa intaa dheer, kalkaalinta Shaqooyinka Dubai ayaa si wanaagsan u dhaqaajinaya.
Adiga kalkaalisadaada Bariga Dhexe waa in aan jeclahay waxa aan qabano. Sababtoo ah marka aad jeceshahay waxa aad sameysid weligaa ma siin doontid. Taas oo dhan waxaad haysataa oo aad u baahan tahay booskan. Dhinaca kale, inta badan hanti-cusbitaalku way wanaagsan tahay in laga baxo.
Marka bukaan cusub uu joogo cosbitaalka ama wixii kale meel. Howshaada kaliya kuma eka qolka jiifka oo ha seexato. Bukaanka intiisa badan waa Dubai waxay ubaahantahay caawimaad iyo kalsooni badan. Oo waxaad u baahan tahay inaad lahaato khibrad. Sidookale, fiirso waxaad ubaahantahay inaad lahaato sida ku tagaan daryeelka caafimaadka.
Mihnad isbitaal ahaan sida kalkaalisada?
Isbitaalada badankood waxay raadiyaan qof diyaar u ah inuu dhaafo. Gaar ahaan gudaha Dhaqanka Carabiga Caawinta dadka waa waxkastoo ay ka shaqeeyaan UAE. Dhinaca togan, haddii aad ogolaato inaad diyaariso kalkaalin caafimaad shaqooyinka UAE. Xaqiiqdii waxaad tahay qof leh wadis dhab ah oo lagu hagaajiyo noloshaada iyo nolosha kuwa kugu xeeran. Gaar ahaan sidii qurbo-joog, Dubay. Waxaad u shaqeyn doontaa si adag, laakiin waqti kasta
Waqti walboo aan bilaabo kalkaaliso caafimaad Xirfadda Dubai. Xaqiiqdii waxaad u baahan tahay inaad ku dhiirrigeliso kuwa kale inay ku caawiyaan. Magaalada Dubai maahan meesha kaliya ee aad ku baari karto shaqooyinka xanaanada. Waxaa jira a liiska dhammaan isbitaallada ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta Emirates.
Daaweynta caafimaadka ee Dubai iyo kalkaaliyayaasha
Musharaxa guuleysta waa inuu sidoo kale akhriyaa a hagaha daaweynta caafimaadka. Inta badan shaqaalaha cusub ee Dubai waa inay awoodaan inay la kulmaan shuruudaha qaarkood.
Aynu ku bilowno adeegsiga qalabka iyo isuduwidda indhaha. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah bukaanno cusub oo leh kids waa inaad hubisaa inaad taqaanid waxaad qabato. Sababta oo ah haddii aad ku dhalatay shaqadan waxaad gaari doontaa oo ciriiri doontaa caqabado badan. Tusaale ahaan, sida dhaqanka cusub ee UAE. Dhaqanka oo dhan wuxuu kaa dhigayaa inaad hoos u eegto jilibka. Iyo sida xaqiiqda ah oo ay ku jiraan foorarsiga, isku dhejinta, jiidista, iyo ku foorarsato waxoogaa horumar ah.
Daaweynta caafimaad ee Dubai maahan heshiis fudud. Waxaad u baahan tahay inaad baratid sharciyo iyo habraacyo iyo gaar ahaan shuruudaha loogu talagalay Dubai. Shaqaale kalkaaliye caafimaad oo ka socda Dubai, waxaad qaban doontaa hawlo kala duwan. Laga soo bilaabo qaar ka mid ah shaqo macquul ah Waajibaadka sida ay codsadeen kormeerayaashu. Iyo qaar ka mid ah howlaha aad u baahan tahay si aad u maamusho naftaada xannibaado aad u sarreeya marka loo eego daaweynta caafimaad sharciga UAE.
Dhinaca wanaagsan, isbitaallada caalamiga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waa isku mid loo shaqeeyaha. Sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa diyaar u ah inay ku shaqaaleeyaan shaqaale kala duwan iyo joogtaynta shaqaale kalkaaliso caafimaad. Kalkaaliye caafimaad oo ku yaal Dubai, waxaad la shaqeyn doontaa dawlado badani Bukaanno caalami ah. Sidaa darteed waa inaad xasuusnaataa in aadan kala takoorin ku saleysan naafonimada, xaaladda ciidanka ama waxkasta oo kale oo lagu ilaaliyo sharciyada federaalka, gobolka ama degaanka.
Shaqooyinka xanaaneynta ee isbitaalada dawlada Dubai
Hase yeeshee, shaqooyinka ugu fiican waxay ku siiyaan inaad weligaa soo iibsato Dubai. Waxay ku yaalaan shaqooyinka kalkaalinta ee Dubai ee isbitaalada ka yimaada Dubai iyo Abu Dhabi. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu fiican, wax su'aalo ah looma weydiin. Intaa waxaa dheer, raaxada inta waxaad u shaqayn doontaa xuquuqda UAE waa ka fiican yahay. Tusaale ahaan, haddii aad raadineyso inaad hesho lacagtaada waqtigeeda. Ama io Waxaad raadineysaa xirfad waqti dheer.
Shaqooyinka isbitaalada dawlada Dubai. Noqo meel ka baxsan dhibaatadaada maalinlaha ah. Iyadoo mushahar fiican iyo dhinacyo fiican oo dhiirrigelin ah. Cagaha ayaad ka qaadi kartaa oo aad ordi kartaa. Waxba ma jiraan haddii aad tahay shaqaale ajanabi ah. Ama adigu nool gudaha Imaaraadka. Waxaa jira hal dhinac oo taban oo tan ah mustaqbalkiisa. Waana shaqo adag. Waxbadan ayaa jira dadka jooga Dubai isbitaallada aad u baahan tahay inaad is daryeesho.
Aan ka bilowno Dowlad Hospitals
Hoos waxaa ku qoran liistada, waxaad ka heli kartaa liiska dhammaystiran ee shirkadaha. Gaar ahaan, haddii aad naftaada maamuleyso oo aad rajaynayso shaqooyinka Kalkaalinta caafimaadka ee Dubai. Shirkadda Dubai City waa shirkad sax ah haddii aad raadineyso shaqo qaybta daryeelka caafimaadka.
Xirfadeena hagaha dhabta ah wuxuu ku siinayaa macluumaad faahfaahsan. Kooxdayadu waxay isku dayday inay kuu maareyso Meelaha shaqada ee Dubai halkaas oo aad ku geyn kartid resume. Liiska ugu horeeya ee liisaska waa ururo la xiriira dawladda.
DHA - Hay'adda Caafimaadka ee Dubai
Ujeedada DHA-ga ee Dubai sida No.1. Guud ahaan, nidaamkan oo dhan waxaa loo sameeyay in lagu bixiyo nidaam daryeel caafimaad oo la heli karo, wax ku ool ah oo isku dhafan. Ilaa hadda nidaamkani waa iyadoo laga qaadayo qiimayaasha gaarka ah macaamiisha.
Maamulka Hay'adda Caafimaadka ee Dubai. Si xaqiiqo ah u sugaya ilaalinta nidaamka caafimaadka bulshada oo aan sare u qaadno halbeeg. Intaa waxaa dheer, dhammaan shaqaalaha la shaqeeya DHA waxay sugayaan rajo si kor loogu qaado tayada nolosha iyo caafimaadka ee Imaaraadka Carabta.
Hay'adda DHA waa ta ugu sarreysa howlaha dowladda. In kabadan ayaa Dubai u beddelay hay'ad daryeel caafimaad. Badankood bukaannaduna way rajo weyn yihiin si looga dhigo halkaan iyada oo la kobcinaayo moodooyinka daryeelka hal-abuurka leh iyo isku-dhafan iyo kor u qaadista ka-qaybgalka bulshada. Hubaashii intaad la shaqeyn doonto kalkaaliye caafimaad oo jooga Dubay. Shirkadani waxay noqon doontaa mid aad u weyn doorashada shaqada ee Emirates.
Dhinaca xun, ma sameyn kartid codsanayaan shaqooyinka tooska ah ee Dubai oo leh DHA. Waa inaad dalbataa bogga internetka ee Dowladda. Intaa kadib waxaa kormeeraya waaxda caafimaadka loogu talagalay Emirate of Dubai. Laakiin wali, DHA waxay sidoo kale diiradda saareysaa bixinta adeegyada iyada oo loo marayo dhowr shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo ku yaal UAE.
Isbitaalada iyo Isbitaalada Hay'adda Caafimaadka ee Dubai
Armada Xarunta Qaliinka Maalinle ah
Kooxda Armada (gaar ahaan)
Dubai Daryeelka Bulshada
HELITAANKA ARRIMAHA DHAMMAAN DHC
Caafimaadka Dubay dareenka waxay bixisaa jagooyin badan. Waad arki kartaa waxa adiga kugu habboon. Websaydhkooda, waad awoodaa bilaabaan xulashada goobta iyo nooca boosaska banaan. Shirkadda labaad ee aad ka heli karto shaqada kalkaalinta ee Dubai.
Si aad u aragto dhammaan furitaannada ku yaal website. Waxay ku meeleeyeen jagooyinka banaan goobta iyo xulashada. Mid kasta sharraxa shaqada oo leh macluumaad faahfaahsan. Fasaxyada ay DHHC ka mid tahay had iyo jeer waxay leeyihiin xiriiriye lagu codsado.
Mid ka mid ah daryeelka caafimaad ee ugu fudud goobaha shaqada si loo helo boos bannaan waxaad si fudud u soo gudbin kartaa bogga internetka ee DHC Online. Tani waa habka ugu dhaqsiyaha badan uguna kalsoonaanshaha loo tixgeliyo mid ka mid ah jagadooda.
Magaalada Caafimaadka ee Magaalada Dubai waxay hada heysaa shaqooyin badan oo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ah. 2018 iyo 2019 waxay si caadi ah u maareeyaan ku dhawaad ​​wadarta 23-50 shaqo (yaasha) furan. Marka waxaa habboon in la eego boggooda internetka waqti ka waqti.
Isbitaalada iyo Isbitaalada Dubai Daryeelka Bulshada
Isbitaalka Magaalada Mediclinic (Mediclinic International)
Dr Sulaiman Al-Habib Xarunta Caafimaadka
Sobeh Vascular iyo Xarunta Caafimaadka
Xirfadlaha Isbitaalka Datat Al Emarat
Isbitaalka Datat Al Emarat waa isbitaal kale Shaqada Abu Dhabi. Isbitaalkan ayaa leh saldhig ku yaal Abu Dhabi. Waxay had iyo jeer raadinayaan xirfadlayaal daryeel caafimaad oo aqoon leh. Gaar ahaan kalkaaliyeyaasha diiwaangashan. Haddii aad xiisaynayso, fadlan u dir CV-gaaga hr@danatalemarat.ae
Waxay yihiin xaqiiqdi xiisi doonaa inay meeleeyaan. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad lahaato waayo-aragnimo wanaagsan. Sababtoo ah shaqaale badan ayaa leh Shaqaalaha isbitaalka Danat Al Emrat haysashada shahaadooyin heer sare ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, la shaqeynta madaxda sare ee daryeelka caafimaadka. Waxaa laga yaabaa in weyn oo ku soo laabatay mustaqbalkaaga.
Shirkaddan ayaa u adeegta inay u adeegto bulshadeena ku dhaqan Imaaraadka. Sidoo kale, shirkadda ugu sarreysa ee bixisa heerarka ugu sarreeya ee daryeelka caafimaadka ee xarun farshaxanimo ah iyadoo lala kaashanayo khubarada caafimaad ee heer caalami ah.
Aragtida Shaqooyinka Kalkaalisada ee Dubai
Shirkaddu waxay raadineysaa inay noqoto hoggaamiye qaran. Hal shay oo leh shirkaddan, waa inaad ku wanaagsanaato daryeelka caafimaadka. Haddii aad raadinayso heer sare iyo cusbooneysiin. Sidoo kale la shaqeynta dumarka iyo qaybta daryeelka caafimaadka ilmaha. Himiladan adiga kuu fiican waa inay noqotaa mid kugufiican. Si joogto ah u xoojinta bukaanka khibradda iyo tayada adeegyada. Bukaannadooda ayaa fure u ah.
Shaqooyinka ku jira Shaikh Khalifa Medical City
Shirkad kale waa inaanu kuu soo bandhignaa waa Sheekh Khalifa Medical City. Sidoo kale ma Ururkii ugu qiimaha badnaa ee shaqada ee UAE. Magaalada Sheikh Khalifa Medical City (SKMC) waxay ku taalaa Magaalada Abu Dhabi. Iyo inta badan isticmaaleyaasha maxalliga ah laga bilaabo qaybtan Emirate-ka adeegsiga xaruntan caafimaad ee magaalada.
Shaqooyinka ee warshadaha Kalkaalisada lama sameyn karo hay'ad calanka ah. Shiikh Khalifa Medical City waa mid ka mid ah. The dadka ajnebiga ahi way jecel yihiin ururkan ee nidaamka caafimaadka dadweynaha ee Abu Dhabi.
Shaqooyinka kalkaalinta caafimaadka ee magaalada Dubai oo ay weheliyaan SKMC waxay leeyihiin dhinacyo badan oo togan. Mid ka mid ah xarumaha heer sare ayaa ah a koox aqoon sare u leh maamulayaasha. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaad sidoo kale ku bixin kartaa adeegyo dhammaystiran dhammaan heerarka daryeelka caafimaadka. Dhinaca taban, waxaad u baahan tahay inaad lahaato khibrad laxiriirta baahiyaha bulshada.
Miyuu u qalmaa in uu la shaqeeyo SKMC kalkaaliso caafimaad?
Waa maxay sababta loo qaddariyo in loo codsado SKMC ?. Sababtoo ah iyagu waa kuwa ugu weyn waxayna leeyihiin a furitaanno badan. Iyadoo aan la xusin inay yihiin cisbitaalka ugu weyn ee UAE. Dhismuhu wuxuu ka kooban yahay cusbitaal 586-sar sare oo jaamacadeed iyo bukaan socod eegtooyin takhasus u leh bukaan-socodka 14. Oo xitaa waad caawin kartaa kuwa kale ee ku saabsan Bankiga Abu Dhabi Bank Sababtoo ah ka caawinta dadka kale waa ka qiimo badan yihiin.
Waxaa sidoo kale aqoonsi ka haysta Guddiga Wadajirka Caalamiga ah. SKMC ayaa sidoo kale loo aqoonsan yahay Xarun Xanuun Xanuun ah oo Wareegta ah oo Dhexgalka Waxqabadka Hore ee Angioplasty. Wixii kabadan in SKMC haysata abaalmarino badan oo caalami ah isla markaana ahaa kan ugu horreeyay dibedda USA si loo gaaro aqoonsiga Cycle III iyo kaliya 12th adduunka oo dhan. Guushaan, waa xaqiiqdii waa u qalantaa inay bilowdo xirfad.
SEHA - Shirkadda Adeegyada Caafimaadka ee Abu Dhabi, oo ay maamusho Cleveland Clinic.
A xirfad la leh Cleveland Clinic Abu Dhabi
Tani waa mid kale Meesha aad ka heli karto xirfad gaar ah. Waxaa intaa sii dheer, kani maahan kaliya UAE saldhigeedu yahay ganacsi. Haddii aad raadinayso waqti kordhin aan isugeyn oo middi ah Xirfadda UAE. Ka dib si aad u dalbato ganacsiga Mareykanka ee Abu Dhabi. Shirkadda waxaa loo yaqaan "Cleveland Clinic's Model of Care".
Shaqooyinka waayeelka ee Dubai, Cleveland Clinic Abu Dhabi waxay si toos ah u heleysaa shaqooyinka. Dibadbaxayaal cusub oo ku yaala Abu Dhabi ayaa foorarsan si aad shaqo uga hesho shirkadkan. Sababtoo ah waxay bilaabi karaan Abu Dhabi. Ka dibna mustaqbalkooda waxay u guureen jihada loogu talagalay daryeelka caafimaad ee ugu fiican dunida.
Shaqo raadin cusub waa inaad xaqiiqdi ka fikirtaa mustaqbalka fog. Xirfadda Kalkaalisada ee shirkad Mareykan ah. Malaha fikrad caqli badan maxaa yeelay taasi waxay noqon kartaa yaraynta shaqo raadinta waqtigaas. Oo waxaad yeelan doontaa bukaanno caalami ah oo khibrad leh. Dhinaca, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto inaad u safarto dibadda si loo daweeyo tababbarka. Tusaale ahaan Mareykanka iyo Canada.
Ku bilow xirfad ku socota Dar Al Shifaa
Goobta xiga ee shaqada kalkaalinta waa Dar Al Shifaa. Ganacsiga xiisaha badan. Guud ahaan, hadalka mid ka mid ah shirkadaha ugu mushaharka badan. Isbitaalka caafimaadka iyo qalliinka, ma ahan Dowlad shaqeyneysa. Laakiin hay'ad laxiriirta Dowlada. Ku istaahila ha eegaan ugaadhsasho xirfadeed cusub.
Adeegyada caafimaadka ee 24 / 7 ee Abu Dhabi. Isbitaalku wuxuu leeyahay Ismaaciil alqaja & wiilal, oo ku yaala Abu Dhabi magaalada, United Arab Emirates. Sidoo kale meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah.
Shaqooyinka xanaaneynta ee Dubai waa wanaagsan ku filan dadka ajnabiga ah?. Xaqiiqdii, Isbitaalka Dar Al Shifaa waa cusbitaalkii ugu horreeyay ee gaar loo leeyahay ee Abu Dhabi. Waxaa intaa dheer, waxay leeyihiin laysan ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka bishii Abriil 1 982. Marka sidaas maahan Dowladda leedahay laakiin si buuxda shati u leh.
Intaa ka baddan, isbitaalka Dar Al Shifaa oo leh tiyaatir si buuxda u shaqeynaya. Iyo qolka dhalidda gudaha dhismaha. Guud ahaan, la shaqeynta qolalka qolalka 16 iyo bukaan-socodka 20. Dhab ahaantii, waxaad ka heli doontaa meelaynta sida kalkaalisada shirkadan.
Shaqooyinka Isbitaalka Caafimaadka
Caafimaadka waa isbitaal ku yaal Abu Dhabi gudaha UAE. Shirkadan ayaa leh a joogitaanka xooggan ee internetka. Isbitaalka oo dhan ma ahan sidaas da 'weyn maal-gashiga. Sababtoo ah Healthpoint waxaa la aasaasay 2013. Iyada oo xushmad sare u haysa aasaasayaasheeda. Oo tan iyo markaa shaqaaleysiiya musharixiin badan loogu talagalay shaqooyinka xanaanada caruurta ee Dubai.
Sidaas darteed haddii aad rabto inaad soo qaadato khibradaada si wadajir ah waxbarashadaada. Xarunta fiicnaanta bukaanka Abu Dhabi iyo Xarunta Daawada Isboortiga. Miyuu yahay shaqo-bixiyeha saxda ah ee aad ku leedahay UAE.
Dhamaan shaqooyinka waayeelka ee magaalada Dubai. Waxaad filan kartaa Wooridul Spine Center iyo Xarunta Qalliinka Bariatric & Metabolic shaqooyinka bannaan. Xaqiiq ahaan, Healthpoint waa qayb ka mid ah Shabakadda daryeelka caafimaadka ee Mubadala. Iyo maaraynta meel fiican iyo sidii cosbitaalka guud.
Ku biir kooxda dhakhaatiirta xiisaha leh Isbitaalka Burjeel. Shirkadani waa mid la isku halleyn karo iyo in la bixiyo adeeg heer sare ah oo xirfadle caafimaad ah oo ku yaal magaalada Burjeel ee Abu Dhabi. Isbitaalkan iyada oo bixisa caawimaad qiimo leh horumarinta shaqooyinka.
Wadnaha guusha sheekada ee isbitaalka. Burjeel waxay leedahay sheeko u gaar ah. Markaa hadaad tahay shaqaale maxalli ah ama baadha qofka jecelna waa inaad iyaga la shaqaysaa. Burjeel, cusbitaalku waa shirkadda kaliya ee rumeysata dadkooda. Tani waa sababta ay dadku ugu soo biirayaan iyaga sida kalkaalisada u tag.
Hagaajinta hannaanka diiwaangelinta ajinebiga cusub iyaga ayaa wanaagsan. Cusub shaqo doonka waa xirfad-yaqaan aad u sareeya. Maamulka cusbitaalkuna si fiican bay u ogyihiin. Markaa haddii lagaa eryo oo aad u xiisaynayso shaqooyinka kalkaalinta ee Dubai. Waad ogtahay waxa aad sameyso, ku soo dhowow reer Burjeel. Isbitaalkan ayaa lahaa waxbadan oo ay bixiyaan si ka badan intaad filanaysay.
Waxay u baahan yihiin xirfadlayaal caafimaad oo cusub. Gaar ahaan dadka qaba xanaanaynta shaqooyinka khibradda Dubai. Waxay furayaan xarun cusub oo soo socota (Burjeel Day Care - Reem Island, Cusbitaalka Burjeel - Al Ain, Magaalada Burjeel Medical.
Qorista Isbitaalka Oasis
Aasaaskii Hospital shaqeeya in kabadan xubnaha shaqaalaha 300. Waxa ugu weyn ee dadka ka kala socda in kabadan dalalka 30 ee adduunka ku soo biiraya way fududahay. Si dadban ayey u shaqaaleysiinayaan. Hay'ado ama dhinac saddexaad midkoodna ma jiro. Markaa way fududahay si aad shaqo u hesho iyaga ula habkan hareeraha.
Oasis Isbitaal dhab ahaantii dadka raadinaya loogu talagalay shaqooyinka kalkaalinta caafimaadka ee magaalada Dubai. Haddii aad kalkaaliye caafimaad u tahay bixinta adeegyada daryeelka heerka sare ah. Xitaa waxbadan samee oo la shaqeynta beesha caalamka ee Al Cayn, United Arab Emirates.
Cusbitaalka Oasis Maamulka HR oo raadinaya dadka. Gaar ahaan xubnaha cusub ee shaqaalaha kuwaas oo la jaan qaadi kara khibradooda shaqooyinka kalkaalinta ee Dubai. Si dhaw ula shaqeynta a deegaan dhaqameed kala duwan ayaa fure ah. Ma tahay qofka aad tahay isla markaana dhiirrigelisay naxariis ku filan ?. Hadday jawaabtu haa tahay, fadlan u dir resumeygaaga.
Masuuliyadaada ugu weyn ee diyaar u ah inay daryeesho loogu talagalay dadka deggan Imaaraadka. Inkastoo maaraynta meheraddaada waxaa laguugu dalacsiin karaa laamaha kale. Tusaale ahaan, deriska la ah Cumaan. Isbitaalka Oasis sidoo kale waa a oo ah wadaad wax ku baraya Imaaraadka Carabta Jaamacadda Caafimaadka Tacliinta.
Isbitaalka gaarka ah ee Ajman
Dowladda Ajman oo leh isbitaal takhasus leh. Kani waa meel aad u fudud oo lagu dalbado resume. Sababtoo ah Ajman Takhasuska Guud ee Isbitaalka wuxuu ku guuleystaa heer sare xagga shaqaaleynta xafiisyada.
Shaqooyinka kalkaalinta caafimaad ee takhasuska leh ee ku yaal Dubai ayaa ku tababbarta gaarsiinta caafimaadka dadka deggan Ajman. Maareynta aragtida isbitaalka dhammaan deganeyaasha iyo shaqsiyaadka shaqaalaha. Ururka waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo shakhsiyaad cusub oo laga yaabo inay ka shaqeeyaan isbitaal.
Maaraynta dib-u-eegista si ay u hesho daryeelka sare ee xanaanada waayeelka Ajman. Gaar ahaan si loo daboolo baahida bukaanka iyo kor u qaadida jawi caafimaad oo fiican ee loogu talagalay qaranka UAE.
Mid kasta oo ka mid ah oo leh dareen gaar ah oo nololeed ah. Gaar ahaan xubnaha cusub ee shaqaalaha. Ayaa laga yaabaa inay si adag u shaqeyso sidii kalkaaliye caafimaad iyo caafimaad qab. Isbitaalka Ajman, waad lahaan kartaa baahidaada iyo rajooyinkaaga. Way fududahay maxaa yeelay in badan oo ka mid ah tababarayaasha cusub ayaa lagu dalacsiiyay sanad shaqo gudahood.
Kalkaalisada Thumbay wuxuu u shaqeeyaa kalkaaliso
Meel kale oo ah markaad bilowdo xirfaddaada xanaanada. Maamul naftaada iyo diiwaangelinta xiisahaada si aad u ogaato fursadaha xirfadeed oo leh rugta caafimaadka ee Thumbay. Ama xataa kooxda oo dhan !.
Mid ka mid ah waxyaallaha, Thumbay Group waxay had iyo jeer ku dadaalaan in ay gaaraan heer sare dhamaan cusbitaalada iyo hawlaha xarumaha caafimaadka. Sida aad u aragto sawirka. Kooxda shaqaaleyaal badan oo Hindiya ah. Sidaas, waa u qalantaa dhul loo helo shaqooyinkaas.
Sidoo kale, iyagoo si adag uga shaqeynaya Imaaraadka. Inaad tahay qof hal abuur leh waa xirfad tartan ku leh Emirates. Jawiga aad bixin karto iyo dhammaan kheyraadka lagama maarmaanka u ah u beddelashada fikradaha dhabta ah. Xaqiiqdii waxay kaa caawineysaa inaad shaqo ku hesho shirkadkan.
Dhanka kale, haddii aad leedahay khibrad sax ah. Adiguna waxaad raadineysaa xanaano shaqooyinka Dubai. Iyo ka dhigaysa mid xiiso u leh qof kasta oo doonaya inuu xirfadiisa ku sii wato hay'adda xannaanada caafimaadka ee Thumbay. Waxay leeyihiin albaab furan.
Kooxda Thumbay ee xirfad?
Kooxda 'Thumbay Group' waxay leeyihiin shaqaale badan. Intaa waxaa dheer, badankood waxay ku raaxeystaan ​​xorriyad aan xadidneyn waqti kasta heer xirfadeed. Gaar ahaan kuwa raadinaya inay horumariyaan xirfadahooda iyo aqoontooda warshadaha isbitaalka. Ama loogu talagalay qofka bilaabaya kalkaalin caafimaad shaqada iyo kor u qaadista xirfadooda.
Shaqaalaha cusub ma aha oo kaliya inay dareemaan heer sare oo shaqo ku qanacsan. Dhinaca kale, iyagana waa la siiyaa Fursado badan oo loogu talagalay kobaca shaqada iyo horumarka. Nidaamka shaqaaluhu wuxuu dhiirigaliyaa shaqaalaha cusub si loo hagaajiyo loona horumariyo. Sababtoo ah bukaanka ayaa ugu muhiimsan iyaga.
Isbitaalka Dibba - Al-Fujairah
Dibba Al-Fujairah waa magaalo weyn oo ku taal imaaraatka Fujairah oo ku taal Waqooyi-bari qayb ka mid ah Imaaraadka Carabta. Isbitaalka, dhinaca kale, ma ahan mid aad u ballaaran. Laakiin wali waad arki kartaa muuqaal ay shaqaaleysiinayaan. Dhinaca taban, iyagu ma leh degel internet ah. Marka waa inaad wacdaa oo weydiisaa emayl. Ama hubi boos banaan bogga Wasaaradda Caafimaadka.
Waa runtii u qalantaa in laga shaqeeyo magaaladan. Waa juqraafi ahaan qayb ka mid ah gobolka Dibba. Dibba Al-Fujairah waxaa loo tixgelinayaa in ay tahay magaalada ugu weyn ee 2 ee amiirka Fujairah. Isbitaalkaan runtii waa u qalantaa inuu booqdo sida dalxiis. Gaar ahaan haddii aad qoys leedahay.
Iyada oo leh aag kilomitir laba jibaaran oo ah 600, Dibba Al-Fujairah waxay lahayd dad lagu qiyaasey 31,301 (qiyaaso) Bishii Janaayo 2018. Marka, meeshani waa meesha ugu fiican ee lagula dejiyo carruurtaada iyo naagtaada. Oo waa wali Imaraatka carabta ayaa Imtixaan ka qaada nolosha.
Ma jiraan meelo badan oo kalkaalisadu u shaqeyso?
Haa! aan dirno Resume si toos ah
Qaybtayada dambe ee Qodobka. Khabiirkayaga ayaa ku tusaya sida loo helo kalkaaliye caafimaad Shaqada Dubai. Waxaad ugu diri kartaa faahfaahinta dalabkaaga dhowr rugo caafimaad oo gaar loo leeyahay. Waxay kaloo qortaan kalkaaliyeyaal caafimaad ee United Aarab Emirates.
Riix sawirka oo codso shaqooyinka kalkaalinta.
Isbitaalka Medicare ee ugu wanaagsan
Noa Dental Dental
Bariga Dhexe ee Mediclinic
Versailles Daryeel-caafimaadeedka ilkaha
Isbitaalka Al Jahara ee Sharjah
Isbitaalka Mareykanka ee Dubai
Isbitaalka Belhoul ee Yurub
Miyuu u qalmaa inuu lacag sameeyo sidii Kalkaaliye Diiwaangashan?
Haa, hadda waa waqti ku habboon Imaaraadka Carabta. Dhaqaalaha ayaa koraya. Iyo helitaanka shaqo sida Kalkaaliyeha Diiwaangashan waa inuu ahaado mid sahlan. Gaar ahaan ka hor soo saar 2020 mashaariicda iyo dhaqaalaha cisbitaallada.
Oo uu helo mushaharka celceliska maaha mid xun. Bilowga xirfadda, waxaad filan kartaa AED 94,203 sanadkiiba. Dabcan, waxaad kordhin kartaa mushaarkaaga. Laakiin waxaad u baahan doontaa inaad u gudubto imtixaan dheeraad ah iyo tababar dheeraad ah oo isbitaal ah.
Xirfadaha lacag bixinta ugu sarreeya waxay la xiriiraan isbitaallada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda. Qaar ka mid ah xarumaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale ah shaqaaleynta lacag fiican. In ka badan intaas hadaadan waayo aragnimo fiican laheyn. Waxaad ka fikiri kartaa shaqooyinka sida Caafimaadka Guriga / Daryeelka Guriga, Unugga Daryeelka Degdega ah ee Dhallaanka (NICU), Shaqada & Dhalmada, Dhalashada, iyo Daryeelka Caafimaadka. Tan Xirfadlayaashu waa bilow adag, gaar ahaan dadka ajnebiga ah. Laakiin mudada dheer, waxaad arki doontaa qiimo fiican markaad hesho dhiirrigelin.
Dhanka kale dadka daryeelahan guud ahaan, ma laha wax kabadan sanadihii 20 'waayo-aragnimo ah. Khibrad waxay saameyn dhexdhexaad ah ku leedahay dakhliga shaqadan. Laakiin fiirso waxa aad u qalanto. Iyo intaad ka qaban karto kalkaalinta caafimaadka Shaqooyinka Dubai ee hoos ku xusan.
Dubai City Shirkadda hadda siisa wax wanaagsan Tilmaamaha Shaqooyinka ee Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hada heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo ka shaqeynta dalka Isutagga Imaaraatka carabta adiga oo leh luqaddaada.